Yekukurumidza kuenzanisa pakati peese maPhones | IPhone nhau
Gore rega rega Apple inotiratidzira ne iPhone nyowani uye mitsetse muApple Chitoro isati yatanga, chiratidzo chinoratidza kubudirira kwayo. Zvisinei, hapana Apple inotanga pasina kukakavara, apo yakanga isiri iyo antenna matambudziko ndiyo yakakurumbira "bendgate". Naizvozvo, chimwe chezvinhu zvekuda kuziva isu chatinoda kuona zvakanyanya chinogara chiri kuenzanisa pakati peiyo nyowani iPhone uye mamwe maPhones, ndiyo nzira iri nyore yekutenda kuvandudzwa kuri kuitwa neApple nekufamba kwenguva. Ndosaka tichikuunzira iyi vhidhiyo yekuda kuziva matinogona kunzwisisa munguva chaiyo kuti yega yeiyo iPhone yakatangwa kubva pakatangwa yekutanga iPhone 2G inoita.
Ichiri mangwanani-ngwanani kutaura nezve iyo iPhone 6s, saka hapana zvirinani pane nekuenzanisa kunotibvumidza kuona iyo YouTube chiteshi inonzi ZveseApplePro, imomo matinogona kuona iyo iPhone 2G, 3G, 3Gs, 4, 4s, 5, 5s, 6, 6+, 6s, 6s + zvishandiso. Unganidzo yakazara isina kuenzana iyo inopfuura mumwe wedu angada kuve nayo pamba. Pakati pezvinhu zvinonyanya kuzivikanwa tinogona kukoshesa kumhanya kweiyo WiFi chip izvo zvakawedzera zvinoshamisa nekufamba kwenguva kune izvozvi 300Mbps inotsigirwa neiyo iPhone 6s, ichipfuura nekuita kweHTML 5, chimwe chinhu icho Steve Jobs pasina mubvunzo chaizoita, uyo akazvizivisa achipesana neAdobe Flash Player.
Makore masere chete apfuura uye kufambira mberi kwave kushamisa, masimba haana kuenzaniswa, kuvandudzwa kweTouchID, mhando yechiratidziro ... Zvisinei, pane chimwe chinhu chave chiri kuperekedza Apple kubva payakatangwa, dhizaini yepamberi. uye kunaka kwezvinhu, iyo yakatungamira iyo iPhone kuti ive smart nhare mbozha ine vateveri vazhinji kwazvo pasirese, uye dai isiri iyo yekutengesa zvakanyanya, zviri pachena kuti ndiyo inonyanya kuzivikanwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Yekukurumidza kuenzanisa pakati peese maPhones [VIDEO]
Maitiro ekugonesa 4K kurekodha pane iPhone 6s